FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA GAMPR ARMENIANINA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika gampr armenianina
Isildur the Armenian Gampr - sary nahazoana alàlana avy amin'ny Armenian Gampr Club of America
Ny Armenian Gampr dia alika goavam-be manana firafitry ny taolana mavesatra, palitao roa sosona, vatana hozatra ary hery mitarika mahery vaika. Ny loha dia lava kokoa ao amin'ny cranium raha oharina amin'ny monotra. Ny vatana dia tokony ho lava kokoa noho ny haavon'ny soroka. Ny palitao dia mety ho fohy, salantsalany na lava, ary na inona na inona loko, fa lava indrindra hatrany ambonin'ny soroka sy tratra ary amin'ny volom-borona eo amin'ny sisiny. Satria ny Gampr dia karazan-tany fa tsy karazan-kazo manara-penitra, misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny karazany, ny fisehoany ary ny toetrany. Matetika ny sofina dia voakapa taoriana kelin`ny nahaterahany, ary indraindray ny rambony koa voakapa.
Matetika ny Gampr dia mihataka, tsy milalao lalao ary aleony mandinika amin'ny toerana malaza fa tsy manao kilalao mahazatra. Miavaka ny toetra Gampr. Izy io dia mpiambina sy mpiambina ny fianakaviana, ary ny fiambenana azy dia tsy azo esorina, fanabeazana sy fanadiovana fotsiny. Izy io dia manana finiavana mafy sy mahaleo tena, fa te-ho lasa fianan'ny tompony ka hatramin'ny fanekena sy ny faniriana hanao ny tsara. Malemy fanahy foana amin'ny ankizy. Ao amin'ny fianakavian'i Gamprs rehetra, dia hisy ny sasany miaraka amina mpiambina olona ambony ary ny sasany tsy miambina afa-tsy amin'ireo mpihaza tongotra efatra. Hisy ny sasany izay mifantoka amin'ny fiarahan'ny olombelona akaiky, ary ny sasany izay manalavitra kokoa. Miaraha miasa amin'ny mpiompy malaza iray izay afaka manampy anao hanana toetra mety amin'ny toe-javatra iainanao. Matetika, Gampr izay nafindra toerana, toy ny alika kely alohan'ny ahatongavany voalohany, dia ho saro-kenatra ary tsy hihinana, mandra-pahatoky fa tao no tokony hisy. Gampr mahazatra dia hiambina ny tranony na ny toeram-pamboleny, fa ho mora azo kokoa amin'ny fananany manokana. Ny alika olon-dehibe dia tokony hiarahaba ireo vao tonga any ivelan'ny faritany, ary ny fitambaran-tenan'ny vatana dia tokony hojerena sy harahi-maso raha te hahita fahombiazana. Ny fihetsika henjana miaraka amin'ny rambony mitazona avo dia mariky ny fanapahana kendrena sy ny mety fifanandrinana, raha fihetsika milamina kosa, aondrana ny lohany / mitongilana mankeny amin'ny sisiny, aondrany ny rambony, dia mariky ny finamanana. Noho ny toetrany mahaleo tena matanjaka dia mieritreritra indroa izy rehefa mahazo baiko. Tsy atolotra ho an'ny tompona alika voalohany, na olona tsy mahatakatra fihetsika alika voajanahary na izay tsy maniry ny hanana serieux amboa mpiambina . Ny tompona alika mpanaradia dia tokony ho vonona handany vola sahaza amin'ny fencing tsara sy fotoana betsaka amin'ny -piaraha-monina ary mitazona ny an'ny olombelona mpitarika fonosana sata amin'ny alika. Ny Armenian Gampr dia mila hentitra, milamina, matoky tena, tompony tsy tapaka .
Hahavony: 25 - 35 santimetatra (63 - 89 cm)
Lanja: 85 - 185 pounds (38 - 84 kg)
Ny lehilahy mazàna dia lehibe kokoa noho ny vehivavy. Ny lohan'ny lahy dia lehibe sy mavesatra tokoa rehefa mihamatotra izy.
Ny fomba fanao vaovao amin'ny fampiroboroboana ny tsipika sy ny fiampitana mifandraika amin'ny valan-javaboary Gampr dia nahatonga ny fitomboan'ny tsy fahatomombanan'ny fihenan'ny valahana sy ny hock mahitsy loatra. Tsy misy olana ara-pahasalamana hafa fantatra hitranga raha tsy amin'ny fotoana tena tsy fahita firy. Hitan'ny tompona sasany fa tsara amin'ny sakafo manta ny Gampr.
Ity karazana alika ity dia mety indrindra amin'ny toeram-piompiana iray na fianakaviana, miaraka amin'ny toerana malalaka manodidina ny trano ahafahany mandositra an-kalalahana amina faritra malalaka. Ny Gampr dia amin'ny alina, ary ara-dalàna ny faniriana hizaha / hanao fisafoana amin'ny maraina sy amin'ny takariva. Ny hetsika lehibe indrindra dia eo anelanelan'ny 4:00 maraina ka hatramin'ny 8:00 maraina, ary amin'ny hariva. Ny alika tanora izay mianatra miara-miasa amin'ny biby fiompy dia tokony hapetraka any ivelan'ny faritra misy fiompiana amin'izao fotoana izao mba hampihena kely ny fahafaha-milalao sarim-bidy, ary miaraka amin'ny tahiry aorian'ny sakafo maraina, aorian'ny 9:00 maraina. , ireo torolàlana ireo dia mandeha tsara amin'ny fotoana laniana amin'ny ankizy koa. Satria amin'ny alina, ny Gampr any ivelany dia mety hipoaka mba hanelingelina ny mpiara-monina aminy, koa raha izany no olana dia miomàna hitondra ny Gampr ao an-trano. Mazava ho azy fa mpiambina ny toeram-piompiana iray dia hajanona any ivelany amin'ny alina raha te hanao ny asany, izay mety misy ny fangotrokotroka.
Rehefa tsy miasa mpiambina biby fiompy dia tokony horaisina ho a mandeha isan'andro, mandeha lavitra izay amboarina ny alika. Tsy tokony havela handeha hivoaka eo alohan'ilay mitazona ny fitarihana izy io, satria ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia mila olombelona. Ny alika tanora dia tsy tokony hampiasa tohatra, satria mety hiteraka olana eo amin'ny valahana izany, ary tokony hanana fanatanjahan-tena tsara amin'ny faritra mikitoantoana izy ireo. Ilaina ny mampiditra kilalao masiaka amin'ireo canine antitra hafa, satria io dia hampianatra alika tanora hanefitra ny halehiben'ny heriny, hamaky ny fitenin'alika iray hafa, ary hitondra tena amin'ny fomba eken'ny fiaraha-monina.
12-16 taona eo ho eo. Ny Gampr dia matotra miadana kokoa noho ny alika antonony, manohy mitombo avo kokoa hatramin'ny faha-3 taonany. Mameno ara-batana mandritra ny taona maro lava izy io, manitatra ny endriny.
shih tzu tariby volo terrier afangaro
Ny Armenian Gampr dia mandatsaka indray mandeha na indroa isan-taona amin'ny habetsany. Ny fikarohan-drongony dia ilaina amin'ny fikolokoloana amin'izao fotoana izao, raha tsy miasa any an-tsaha ilay alika, ka hanosotra ny palitaony ho 'madio' amin'ny borosy, vato ary hazo. Ny rakes mandatsaina dia faniry sy mahomby kokoa. Ny fanaovana fandroana dia tokony atao an-kalamanjana, ary ny fitaovana fanosotra soavaly faran'ny fantsona dia mandeha tsara. Ny fandroana dia afaka manampy amin'ny famahana ny volo antitra amin'ny fotoana fandatsahana. Ny Gampr mahasalama amin'ny sakafo manta dia tokony ho tsy misy fofona.
Ny Gampr Armeniana dia nipoitra tao amin'ny tanindrazana manan-tantara any Armenia, Armenia Andrefana (Anatolia ankehitriny no antsoina hoe) ary ny atsimon'i Caucasus. Ny angano tafiditra ao amin'ny kolontsaina talen'ny Armenianina talohan'ny andro kristiana dia nanondro fa lasa alika ny alika tamin'ny alàlan'ny fambolena, rehefa ny kolontsaina mpivavaka volana sy andriamanitra amboadia namela ny kolontsaina mpivavaka andriamanitra sy andriamanitra tamin'ny andron'i Paleolithic. Nolazaina fa ny andriamanitra masoandro Ar dia naniraka ny mpanampy azy, ilay andriamanitra alika manana elatra Aralez, hitondra afo ao am-bavany hampiasa olombelona. I Aralez koa dia voamarina fa nanasitrana miaramila naratra ary nitondra ny lela velona tamin'ny lelany manasitrana. Rehefa nitety an'i Caucasus, Persia, Azia afovoany ary Eropa ny Armeniana dia nitondra ny alika mpiambina azy ireo ary nanaparitaka ny karazany hatrany lavitra. Nolazaina fa Tigran the Great dia tena tia ny Gampr ary nitazona akaiky azy foana. Tigran the Great dia Mpanjakan'ny Mpanjaka tamin'ny taonjato lasa talohan'i JK, ary nampiray fanjakana marobe tamin'ny fifanarahana, hatrany amin'ny Ranomasina Mediterane ka hatrany Pakistan. Izay nalehan'ny olombelona dia lasa koa ny Gampr. Nandritra ny fitondrana sovietika, maro ny Gampr lehibe kokoa noho ny volo no nalaina ary namidy tao amin'ny programa fiompiana Red Star, izay namokatra ny Caucasian Ovcharka tamin'ny alàlan'ny fampidirana ireo génétika tany am-boalohany an'ny Gampr tamin'ny karazany hafa. Taorian'ny nandravana ny USSR dia nivory nanodidina ny dobo filokana sisa tavela i Armenia, ary nanomboka ny fizarana anarana tamin'ny fanomezana anarana ofisialy ny karazany izay tao anatin'ny kolontsain'izy ireo nandritra ny an'arivony taona maro. Tigran Nazaryan dia nanomboka ny tahiry amin'ny alàlan'ny gampr.net, izay nanentana ny fanahy masina ny famoronana ny Armenian Gampr Club of America. Nanomboka tamin'izay, tamin'ny ezaka nataon'i Violeta Gabrielyan, ny IKU dia nanaiky ihany koa ny karazana tany am-boalohany an'ny Kaokazy, Trans-caucasus ary Highland Armeniana (Anatolia no anarany ankehitriny).
Molosser, mpiambina andiany
AGCA = Club Arménianina Gampr any Amerika
Zovoony ilay vehivavy miasa ho an'ny Armeniana Gampr, sary natolotry ny Armenian Gampr Club of America
Gampr vehivavy Armeniana miasa toy ny mpiandry ondry miambina ny ondriny, sary natolotry ny Armenian Gampr Club of America
Gampr vehivavy Armeniana fotsy, sary natolotry ny Armenian Gampr Club of America
Isildur the Armenian Gampr, sary natolotry ny Armenian Gampr Club of America
Isildur the Armenian Gampr tamin'ny faha-3 1/2 taona, sary nahazoana lalana avy tamin'ny Armenian Gampr Club of America
Gmen Armenianina ao amin'ny Kianja Sakharov, sary nahazoana alàlana avy amin'ny Armenian Gampr Club of America
Lehilahy mainty sy fotsy Armenianina Gampr, sary natolotry ny Armenian Gampr Club of America
Sary natolotry ny Armenian Gampr Club of America
red setter vs irish setter
Puppy Armenian Gampr vehivavy, sary natolotry ny Armenian Gampr Club of America
Puppy Armenian Gampr lahy, sary natolotry ny Armenian Gampr Club of America
Shimoon ilay alika gampr Armeniana lahy izay 7 volana nohafarana avy any Armenia nankany Etazonia
mifangaro heeler sy border collie
cairn terrier sy poodle mifangaro
mifangaro volo terera volo miharo volo
mastiff rottweiler Mix alika kely amidy
Ahoana no ilazana chihuahua purebred
jack russell terrier mix alika